Xil.Dheeg Oo Ka Tirsan Golaha Guurtida Oo Ganafka Ku Dhuftay Baaqyada Kasoo Yeedhaya Mucaaradka Ee Kala Dirista Xukuumada Iyo Golaha Wakiilada | Duul News International
Xil.Dheeg Oo Ka Tirsan Golaha Guurtida Oo Ganafka Ku Dhuftay Baaqyada Kasoo Yeedhaya Mucaaradka Ee Kala Dirista Xukuumada Iyo Golaha Wakiilada	(Duulnews)-Xildhibaan Maxamed Maxamuud Dheeg oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida somaliland ayaa sheegay inaanay doorashadu wakhtigeeda ku dhacayn Golaha Guurtiduna ka gudan Doonaan Waajibaadkooda Dastuuriga.
waxa uu sheegay xildhibaanku in Ay madasha wadatigu tahay mid Aan sharci ahayn,dawlada ku meel gaadhka ah ee ay ku baqeena tahay mid ka hor imanaysa sharciga dalka.
Xildhibaan dheeg waxa uu guddoomiyaha golaha wakiilada u soo jeediyay inuu isagu iskaga tago golaha wakiilada hadii uu nacay,balse aanay jirin gole lakala diri karo.
Xisbiyad mucaaradkana waxa uu ku sifeeyay qaar kursi jacayl dalka Fawdo u galinaya isaga oo u soo jeediyay in Cagaha u dhigaan Siyaasadooda oo
uu ku tilmaamay mid Fashilmatay.
“Dalku waxa uu leeyahay Sharci isaga oon siilaanyo Madaxwayne Ahayn cirana aanu mucaarad ahayn ayaa lasameeyay dastuur %97 ayaa u codeeyay markaas kaas ayaa loo cadeeyay dalkuna ku shaqaynayaa oo aanu ku ognahay,dawladan ku meel gaadhka ah iyo golaha wadashtigu cod ha u qadaan oo shacabka hawaydiiyaan oo ha u soo codeyeen sida dastuurka loogu codeeyay.
intaas waxa uu ku daray xildhibaan dheeg.”Dawladana way siidhacaysaa ee dawlada ku meel gaadh ah hala sameeyo anagu garan mayno,Ninka doonaya inuu dalkan madax ka noqdana am wasiir ka noqdo waxa uu ku fikiro iyo waxa uu idaacada ka soo jeediyo dawlada ku meel gaadh ahi majirto,markaas waxaan odhan karaa axsaabta mucaaradku shacabka ayuunbay isku sheegayaan inaanay waxba qaban Karin.
Waxa uu sheegay xildhibaanku in ay Mucaaradku dawlada ku meel gaadhka uga dan leeyihiin in ay dalka khal-khal siyaasi galiyaan,dalkuna waxa uu sheegay inaanu muran galayn golaha guurtiduna waajibaadkooda gudan doonaan.
“Gole kastaa ilaa inta gole lasoo dooranayo isaga ayaa kursiga fadhiyaya ilaa inta laga soo dooranayo gole kale oo badali doona,Mana dhici doonto in golaha laka diro ninka ku han-jabaya golaha hala kala diro isagu ha iskaga tago golaha Ayaan odhan karaa,Lakiin sharciga dalka u yaala nina ka talaabsan mayo.
Xildhibaanku waxa uu ku nuux-nuuxsaday in Madasha wadatisha marar badan loo soo jeediyay in ay Axsaabta mucaaradka ku biiraan taas oo ku sifeeyay mid ay ka biyo diideen Madasha wadatashiga oo ku sheegay mid sharci daro ah.
“Nimankan madashu in ay galaan xisbiyad mucaaradka way ka xaragoodeen,lakiin waxaan lasiiyaabanay nimanka diidan in ay ku biiraan Axsaabta siyaasada ee hadana talooyinka lasiinayo ee hadana leh golahii wakiilada hala kala diro sharci dajinta ahaa Ayaan la yaabanay.
Golaha Guurtida xildhibaanku waxa uu ku tilmaamay Qaar Aan ka qayb galay talada qaran ee ay ku qabeen madasha wadatashiga iyo Axsaabta mucaaradku oo ku sifeeyay qaar Aan sharciba ahayn,Dawladana waxa uu ku tilmaamay mid ka xaragootay in ay xidho madasha wadatishiga.
“Guurtidu inta ay iska fadhiisato waxba makordhiso komiishanka ayay ka timadaa,Golahuna waa uu ka fadhiistaa,markaas wali anaga waxba namay soogaadhin waraaq nafarsay in mudo kordhin aanu samayno,markaas kolay dalku fawdo galimaayo ee waajibaadkiisa dastuuriga ah ayaanu ka gudanaa,haday doorasha dhici waydo xukuumada joogta ayaanu u kordhinaa,haday dhacdana cidii Aanu doono ayaanu u codaynaa.
Waxa uu intaas ku daray”hadii cabdiraxmaan ciro oo ah guddoomiyaha wadani golaha wakiilada nacay isagu ha iskaga tao gole kala tagayaa majirto,shacabkana waxaan leeyahay nin kursi jacayl hayaan yaanu idinku guurin oo hadhow idiin furi doonin.